HAMBA KWIIYILO ZOSHOWER (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Hamba kwiiYilo zoShower (Isikhokelo sokugqibela)
Hamba kwiiYilo zoShower (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwigalari yethu yokuhamba kuyilo loyilo kubandakanya iintlobo ezithandwayo, ubukhulu, iindleko kunye nemibono yoyilo.
Ukuhamba kwimvula kunokuba longezo lwanamhlanje kwaye lihle nakweyiphi na indlu yangasese xa zenziwe ngokufanelekileyo. Njengayo nayiphi na into eyiliweyo yoyilo lwasekhaya, hamba kwiishawa ayisiyonto ilinganayo. Kukho inani elingenasiphelo leendlela onokuyila ngayo ishawa yakho ukuze ilingane nezinto ozithandayo kunye nolwakhiwo lwekhaya lakho.
Ukuhamba kwiishawa kwahlukile kwiishawa ezisemgangathweni kuba azidingi isitera sokuhlamba esipheleleyo. Endaweni yoko kuya kufuneka ukwazi ukungena ungqale ngqo kwigumbi lokuhlambela endaweni yokungena ebhafini. Nangona kunjalo, bahlala benamanzi okanye iipani ezingacacanga ukuqinisekisa ukuba amanzi avela kwishawari awangeni kwenye indawo yokuhlambela.
Ngeendlela ezininzi zokubandakanya enye yezi zihlambi ekhayeni lakho, kunokuba kuhle kakhulu ukufumana uyilo oluhambelana nesitayile sakho. Iindaba ezimnandi zezokuba awuwedwa ekusongeleni intloko yakho ngolu hlobo loyilo. Silapha ukuze sikunike isikhokelo sethu sokugqibela kuyo yonke into oyifunayo malunga nokufaka ishawa kwindlu yakho.
Hamba ngeMilinganiselo yokuhlamba
Hamba ngeNdleko yokuhlamba
Iindidi zemvula yokuhamba
Ukuhamba ngeTayile kwimiboniso
Hamba ngeemvula ngaphandle kweminyango
Ukuhamba okukhulu kwimvula
Ukuhamba ngesiqhelo kwindawo yokuhlamba
Ukuhamba ngamatye kwindawo yokuhlamba
Hamba ngeeMvumbi zeZindlu zokuhlambela ezincinci
Ukuhamba okuncinci kwindawo yokuhlambela engenacango
Hamba ngokuhlamba ngeBench
Ukuhamba kweglasi kwindawo yokuhlamba
Ukuhamba kwale mihla kwindawo yokuhlamba
Hamba ngeShower Steam
Ukuhamba kweRustic kwindawo yokuhlamba
Hamba ngokuhlamba ngeHall Wall
Hamba kwiiShow Remodel Ideas
Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa yonke imibala emhlophe yokuhamba kwakho kwindawo yokuhlamba, enye indlela yokugcina ingaphakathi lingakhange libukeke kwaye liyadika kukusebenzisa iithayile zodonga ezineepateni ezifihlakeleyo kunye nokukhanya okuphantsi.
Kulo mfanekiso ungentla, i-marble efana neethayile ezinkulu zodonga ezidityaniswe ne-herringbone patterned tiles mosaic zinika olu hambo kwishawari ngokubonakalayo nangobunzulu kunye nobukhulu, ngelixa kugcinwa ukubukeka okucocekileyo, okucocekileyo nokuqaqambileyo.
Ukuhamba kwikona kwimvula kunceda ukwandisa indawo yokuhlambela. Ukonyusa ukusebenza ngokukuko kokuhlamba, iishelufa zekona ezidadayo kunye nebhentshi encinci ejingayo inokudityaniswa kuyilo. Olunye uhambo olukhulu kwimvula lunokubandakanya itafile engento kunye nosihlalo.
Omnye wemibuzo esisiseko ukuyiphendula xa ufaka ukuhamba kwisitya kukuba inkulu kangakanani loo shawari. Oku, ewe, kunokwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani begumbi lakho lokuhlambela kodwa kukho izikhokelo ekufuneka uzilandele.
Ububanzi bokuhlamba ubukhulu bulinganiswa kwii-intshi ezingama-36, ii-intshi ezingama-32, okanye ii-intshi ezingama-60. Leyo milinganiselo emithathu icwangciswe ngokulandelelana ngokwendlela abaqheleke ngayo. Ububanzi obuqhelekileyo obuqhelekileyo bubandakanya imilinganiselo enje ngama-42 kunye nama-48.
Kuyavunyelwana ngokubanzi ukuba ubungakanani bokuhamba ngobungakanani beeshawari ngama-32 x 32 kodwa uninzi lwabanini bamakhaya lubufumene obu bungakanani buncinci kunokuba bebengathanda. Ubungakanani obulandelayo ngu-34 x 34, 36 x 36, kunye no-42 x 36.
Yintoni uninzi lwabantu olucinga ngayo ngobungakanani beeshawari obonwabisayo obanika igumbi elingaphezulu komndilili kukuhamba okungama-48 x 36 kwishawari.
Ukuba ufuna igumbi elithe kratya, ungavuma nge-48 x 48 ishawa kwaye ngakumbi izindlu zokuhlambela ezinkulu ngamanye amaxesha zinokuhlala i-60 x 36 enkulu kakhulu ishawa ebutofotofo . Uyakufuna kwakhona ishawa enkulu ukuba ujonge okungakumbi ekuhambeni kwakho kwishawari njengeebhentshi.
Ke, kukho ukuphakama kweshawa sokukhathazeka. Oku kuya kwahluka ngokuxhomekeka kubukhulu bekhaya lakho kodwa kubalulekile ukuqwalasela ukuphakama kwesilingi ngokuhambelana nobude nobubanzi beshawa sakho.
Ngokwesiqhelo, uphahla lwakho oluphezulu kufuneka lube zii-8 iinyawo. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba ufuna ishawa yomphunga kuba awufuni isilingi ephezulu kangangokuba umphunga uya kuchithakala ngelixa uhlamba. Kuya kunceda uyilo ukuba lube nomtsalane ngakumbi xa uqwalasela le milinganiselo xa iyonke.
Kwishower ye-8 yeenyawo, ubukhulu be-lateral zihlala zi-60 x 48. Unako nokuhamba kancinci ngobukhulu obufana no-66 x 66 x 90, 54 x 35 x 89, 71 x 47 x 88, okanye u-42 x 42 x 82.
Nje ukuba uthathe isigqibo ngobungakanani beshawa yakho, kuya kufuneka uqwalasele into oboyikayo abaninimzi abaninzi. Kuza kubiza malini ukulungisa indawo yakho yokuhlambela ngokuhamba ngeshawa?
Olona khetho lubiza kakhulu xa kuziwa kolu luyilo kukuthenga i-prefab walk in shower kit. Oku kuyakuqhuba naphi na ukusuka kwi- $ 800 ukuya kwi-2,500 yeedola ngokuxhomekeke kumgangatho wezixhobo ezikule khithi.
Ungagcina imali eninzi ukuba ungayithatha njenge-DIY kodwa kufuneka ukhululeke kubungcali bakho kwimibhobho yamanzi nakwifreyimu. Iya kukuxabisa ngakumbi ekuhambeni kwexesha ukuba ishawa ifakiwe ngokuchanekileyo.
ngowuphi umnwe wokunxiba umsesane womtshato
Ukuba uqesha ikhontraktha, kuya kufuneka bakunike uqikelelo lweendleko ngaphambi kokuba baqale umsebenzi kodwa uluhlu oluphakathi luphakathi kwe- $ 750 kunye ne- $ 2,500 yofakelo lwe-prefab.
Oluqikelelo lotshintsho olusekwe kubunzima bomsebenzi kunye nokuba kuthatha ixesha elingakanani ukuwugqiba. Izinto ezinobunzima zihlala zivela kwinkqubo yemibhobho yendlu yakho kunye nolwakhiwo lwegumbi lokuhlambela.
Ukuhamba ngokwesiko kwimvula kuya kukuqhubela ityala eliphakamileyo. Ngaphandle kokuba ubungcali ngokwakho, kuya kufuneka usoloko ujika kwikontraka kwezi ntlobo zemisebenzi yesiko.
Kwakhona, ixabiso lixhomekeke kwizinto ozisebenzisayo kunye nenqanaba lobunzima kunye nokusetyenziswa kwexesha okuya kufakelo.
Oku kunokuba phakathi kwe- $ 6,500 ukuya kwi-15,000 yeedola okanye ngaphezulu.Njengoko besesitshilo, indleko zezixhobo zinokudlala umqulu omkhulu kwiindleko zizonke. Ke, kufanelekile ukujonga ezinye zezinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Akumangalisi ukuba i-tile lolona khetho luthandwayo kwiindawo zokuhlambela kunye nokuhamba kwesiko kwimvula yethayile. Le mvula iya kukuqhuba phakathi kwe- $ 8,500 kunye ne- $ 10,000 ngokomndilili. Oku kuyakufumana ishawa yohlobo oluthile yethayile engayi kuba ntle kuphela kodwa yongeze ixabiso nakwikhaya lakho.
Ukuba ufuna ukusebenzisa i-acrylic, ebiza kakhulu, uza kuchitha i-6,000 yeedola ukuya kwi-7,000 yeedola. Oku kuyakukuthengela i-acrylic eyomeleleyo endaweni yokuba ibe kumgangatho osezantsi, i-acrylic ethe-ethe ngathi ngamanye amaxesha ibonwa njengemveliso eninzi kwiivenkile zehardware.
I-Onyx lolunye ukhetho olwahlukileyo olunokubongwa ngenxa yokuguquguquka kwalo. Iza ngemibala emininzi kunye nokufakwa kunye nokufakwa kwayo kuya kukuqhuba phakathi kwe- $ 7,000 kunye ne- $ 8,500.
Ezona ntlobo zithandwayo zokuhamba kwiishawari ziwela kwiindidi eziphambili eziphambili zekona, ikhefu okanye edadayo.
Ukuhamba kwekona kwisitya kunokutshintsha isitayile sendabuko kunye nokudityaniswa kwebhafu. Ngokuqhelekileyo baneziqendu ezimbini zeglasi kunye nokubuyela eludongeni.
Ukuhamba kwakhona kwisitya sokuhlambela kuyilelwe ukubuyisela ibhafu yebhafu. Igcinwe ngaphakathi phakathi kweendonga, endaweni yokubonelela ngendawo macala. Olu hlobo lunendawo enye yeglasi enokufakelwa umnyango ovulekileyo ngasekunene okanye ekhohlo.
Ukuhamba emanzini okuhlamba kunika iglasi enye evumela ukuba kungenwe kwicala lasekunene okanye lasekhohlo.
Olunye uhlobo lweshawari yokuhambahamba ibizwa ngokuba yi igumbi lokuhlambela kwigumbi elimanzi esi sisicwangciso esivulekileyo ngakumbi ngakumbi. Ngelixa ukuhamba ngokwesiko kwishawari kunokuba netreyi yeshawari, inyathelo elingena emnyango kunye neesahlulelo zeglasi ezininzi; igumbi elimanzi linokuvumela umntu ukuba angene kanye engenacango konke konke.
Iithayile lukhetho oluqhelekileyo xa kusenziwa iishawari kunye neendawo zokuhlambela xa zizonke. Enye yezona zinto zitsala kakhulu kwithayile kukuba kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo onokuzifaka kwigumbi lokuhlambela.
Ukudibanisa ubungakanani obahlukeneyo kunye nemilo yeethayile ngelixa unamathele kusapho olunye lombala yenye yeendlela ezishushu zokuhamba kuyilo loyilo. Ayisiyiyo nje kuphela ukuba iyathandeka, kodwa ikwayindlela esebenzayo yokuyila ukuhamba kwakho kwishawari kujongeka kubanzi kwaye kunomoya.
Usebenzisa umbala omnye kwiithayile zomgangatho kunokukunika ukuhamba kwisitya ukukhohlisa kwendawo engaphezulu, kodwa ukuba ufuna ukucacisa indawo yakho yokuhlambela ivela kwezinye iindawo zangasese kunye negumbi lokuhlambela, iqhinga elinye kukutshintsha iphethini kunye nobungakanani bakho iithayile zomgangatho.
Ukuhamba kuyilo lweshawa oluboniswe apha ngentla kukwabonisa ulungelelwaniso olugqibeleleyo kunye nokungafani kwemibala evela kwiithayile zomgangatho wejometri ezingwevu kunye neethayile zodonga ezimhlophe ezibengezelayo.
Gcina uyilo lwetayile yakho enomdla ngakumbi ngokudibanisa ngaphezulu kweendidi ezimbini kunye noyilo lweethayile. Kule ndlela yokuhamba ishawa, iithayile zodonga ezenziwe ngejometri zidityaniswe neethayile zomgangatho wobusi omncinci ukwenza umahluko ocekeceke.
Olunye ulungelelwaniso olufanelekileyo onokuzama ukugcina ukuhamba kwakho kwindawo ephangaleleyo kukusebenzisa isahlulelo esisezantsi endaweni yodonga olupheleleyo lokwahlula iindawo zokuhlamba nezokuhlamba.
Khulisa ukuhamba kwakho kwindawo yokuhlamba ngokufaka umgangatho opheleleyo ukuya kwiiyunithi zokugcina isilingi njengaleyo iboniswe ngasentla. Olu hambo lweklasikhi lwangoku luhamba nekhabhathi enombala ongwevu kunye neengcango zephaneli eziphakanyisiweyo kwindawo yokuhlamba neyamampunge.
Isahlulelo seglasi esahlula ukuhamba ngeethayile kwindawo yokuhlambela nebhafu yokuhlambela, ngelixa iindonga kunye nemigangatho zigqityiwe ngombala omnye wethayile esikwe kubungakanani obahlukeneyo.
Iithayile ezimhlophe ezimhlophe ezicwangciswe ngendlela eyonelisayo yokubona inika iindonga zolu hambo luhambelanayo kwishawari i-vibe yanamhlanje nehlaziyayo. Ukongeza umahluko, iithayile zokuprinta zejometri ezimnyama zazisetyenziselwa imigangatho.
Iithayile ezinkulu ezinemibala engathathi hlangothi ezibekwe kwipateni ethe tyaba yenye into eya kukhuthazo loyilo lwangoku lokuhlambela. Eli gumbi limanzi lokuhamba-ngaphakathi kwindawo yokuhlambela yenza indawo yokukhohlisa, ukwenza iindonga zakho zibukeke zibanzi kwaye ukuhamba kwakho kwishawari kukhulu.
Enye yeendlela ezilungileyo zokufumana uyilo lwenyani olunye kukusebenzisa ipatheni yomfanekiso wethayile. Uyilo lwamatye, njengegumbi elimanzi lokuhamba ngeshawa ngasentla, lahlukile ngokukodwa kuba ufumana ithuba lokudlala ngayo yomibini imibala kunye neemilo ezingaqhelekanga.
Ukuba ufuna ukuzama isitayile se-mosaic ngokufana ngakumbi kunendlela yoyilo lwelitye olunokubonelela, iithayile zesikwere kunye noxande zinokuthelekiswa nento yanamhlanje. Ukuzisebenzisa kumtya othe nkqo ngolu hlobo kukwenza isiqwenga esikhulu sokuqaqambisa amagama.
Uyilo olumangalisayo lwegumbi elimanzi linomgangatho othe tyaba ovumela amanzi ukuba awe ngokusebenzisa indawo efihliweyo yokuhambisa amanzi ngobunono obekwe ngamehlo.
Musa ukoyika uyilo olunesibindi nokuba. Iipateni ezinje ngeshawa yokuhamba ethatha eyona mibala iphambili kwigumbi lokuhlambela kwaye iyibandakanya kwipateni yokuqhekeza eyahlukileyo kwiindonga zeshawari yenza ingxelo yangaphakathi yoyilo.
Ukuba awukho kuyilo olunesibindi, ungakhathazeki! Unokwenza ubukeka obuhle kunye nobanamhlanje ngokusebenzisa iileyili ezinkulu, ezingathathi hlangothi ezifana nale ndawo yokuhlambela. Qaphela ukuba olu luyilo luguqulwa ngokungenamthungo luye kwezinye iindonga kwigumbi ngokunjalo.
Sele sixoxile ukuba unokufumana iziphumo ezimangalisayo ngokudibanisa kunye nokulinganisa iithayile. Kwigumbi lokuhlambela elingentla, ungabona iindonga kunye nomgangatho weshawa usebenzisa iithayile ezinkulu, ezinemibala engathathi hlangothi. Udonga lwangasemva, ngokuchaseneyo, lusebenzisa uyilo lobusi obumnyama nobumhlophe.
Uyakuqaphela kwakhona ukuba iincopho zebhentshi zisebenzisa uyilo lweemabhile. Olu ludibaniso olungekhe ucinge ngalo kwangoko kodwa kuya kubonisa ukuba ukucinga ngaphandle kwebhokisi kunokuvelisa iziphumo ezimangalisayo.
Igumbi elimanzi lihamba ngeshawa ngaphandle komnyango yindlela entle yokwenza uyilo lweshawa kunye negumbi elihamba ngokutyibilikayo kwaye lenze igumbi libukeke likhulu nalo. Oku kunokugcina imali ngokubiza izinto ezimbalwa xa kufakwa.
Ngenxa yoyilo lwezi zihlambi zinomsele phantsi, awunakukhathazeka malunga nesitshizi esiya ngqo kwigumbi lokuhlambela lonke.
Unokusebenzisa isahlulelo seglasi ukwahlula ibhafu kunye neshawari njengegumbi lokuhlambela elinegumbi elimanzi apha. Inokukunceda ukuzisa isihlalo sakho kwigumbi lokuhlambela ukuba awunakho ukubhatala izitulo ezakhelweyo. Kuba akukho mnyango, ukubekwa endaweni akunangxaki.
Ngaphandle komnyango, ungasebenzisa izahlulelo zeglasi ukwahlula ishawa kwiikhabhathi njengoko kubonisiwe apha. Njengale ndawo yokuhlambela, nangona kunjalo, uyilo oluvulekileyo luhambisa igumbi lokuhlambela ukuze ukwazi ukuhamba ngqo ukusuka ekungeneni nakwishower. Izahlulelo ngapha nangapha zokuvula zongeza kulungelelwaniso lwegumbi.
Ukunqongophala komnyango weshawa kukunika indawo yokongezwa okungaphezulu ngendlela efanayo ekuvumela ukuba utsale iziqwenga ezincinci ezinjengezihlalo. Kule ndawo yokuhlambela, ishawa ivule ngokwaneleyo ukuba ibandakanye ibhafu kwindawo enye. Kuba eli gumbi lokuhlambela lincinci kancinci, olu dibaniso lunceda ukulungelelanisa zombini izinto endaweni enye. Bona Okuninzi ityhubhu ngaphakathi yoyilo loyilo Apha.
Le ndlu yangasese isebenzisa uyilo oluvulekileyo kunye nodonga olungqingqwa phakathi kweshawa kunye nebhafu endaweni yokwahlula iglasi. Esi sithintelo sisityebileyo sinika umninikhaya ithuba lokufaka ibhentshi kwishower ngokunjalo. Ikwadala uyilo olungqindilili, oluchaziweyo.
Isithembiso selitye lokuzalwa
Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuba nendawo yokuhlambela enkulu, uhambo olukhulu lokuhlamba isongezo esihle. Kukhetho oluhle kwaye, kuba le mvula ivula igumbi, inokuqaqambisa ukuba likhulu kangakanani igumbi lakho lokuhlambela. Ukuba ujonge uyilo lwala maxesha, leeshawa ikwayindlela entle yokubonisa ezinye izinto zoyilo kwigumbi lokuhlambela kuba alophuki likhethini leshawa.Olu luyilo alunasidima nokuba. Unokukhetha okuninzi okwahlukileyo xa kuziwa kulwenziwo lwakho lokuhlamba kunye nesitayile esivelayo.
Oku Uyilo lweeshawa zemarble ivumela uyilo lomgangatho ukuba luqhubeke kodwa ukutshintsha udonga lokuhlamba ngokunjalo. Kukwanceda ukuba igumbi lokuhlambela linokukhanya okuninzi kwendalo kwiifestile ezintathu eziphambili kunye nefestile encinci kwishower. Ngomgqomo kwi-nook eneefestile, ikwavumela ishawa ukuba yolule ukusuka eludongeni ukuya eludongeni. Enkosi kwibhentshi enkulu efakwe kwishower, indawo isetyenziswa ngokufanelekileyo kunokuba uzive nje uyinyumba ebalulekileyo eshaweni ixesha elide.
Ukuba unodonga lokwahlula phakathi kwesinki yakho kunye nalo lonke igumbi lokuhlambela, ungongeza uhambo olukhulu kwisitya sokuhlambela. Ngoyilo olungenamnyango, le shawa ingena kanye kwisithuba. Oku kushiya indawo eninzi kwaye ayiphazamisi kwibhafu enkulu eyenziwe ukuba ibe yindawo ephambili yegumbi. Uyilo oluncinci kunye nokubeka ecaleni kwecala kuvumela ibhafu phantsi kwekhandlela ukuba likhanye ngokwenene. Ishawa isebenzisa isitulo esingadityaniswanga ukongeza ukuhlala ngaphandle kokongeza kwiindleko okanye ukwaphula ubuncinci ngebhentshi efakiweyo.
Akukho nto ikunika ubuqu bokuhamba ngesiko kwishawari. Ezi zinto zenziwe kukhetho lwakho kwaye zize zingene kuyilo olwahlukileyo kwigumbi lakho lokuhlambela. Iishawari ezinje ngezi kufuneka zihlala zifakelwe yingcali yezona ziphumo zihle bobuchwephesha kunye nobuchwephesha. Ukujongana nenye ngokwakho kuya kukhokelela kwiziphumo zokungabikho.
Ngale shawari, uyabona ukuba uyilo lokuqala lwendlu yangasese lwalulungelelaniswa neshawa. Ukutsalwa kwesilingi kwahlawulwa ngomnyango weshawa. Ukuhamba eshaweni kukwasebenzisa iithayile ezinemigca emnyama ye grout ukutshatisa isakhelo esimnyama sesinyithi. Ikwasebenzisa udonga oluyinxalenye kuyilo ngokunjalo. Ungabona ezinye ezininzi iintlobo zeengcango zeshawa Apha.
Le ndlu yangasese isebenzisa ubude begumbi lokuhlambela kwinzuzo yayo. Ungabona umgca ocacileyo phakathi kwendawo yonke yokuhlambela kunye neshawari enesahlulo sodonga kunye neglasi. Ubude beshawari budala ithuba lenani lezongezelelo njengebhentshi efakiweyo. Ikwavumela iintloko ezimbini zeshawari yemvula yokuhluza okutofotofo kunye nokuphumla.
Le ishawa isebenzisa indawo encinci kakhulu kodwa ayikasileli ukuhambisa kwizinto ezingaphezulu. Ngokukodwa, isabonelela ngesibini seentloko zemvula. Endaweni yokuba zilungiswe eluphahleni, ezi zincanyathiselwe eludongeni. Uya kuqaphela ukuba le shawa isebenzisa itafile egcwele iingcango ukukhusela i-hardwood flooring yegumbi elilandelayo.
Igumbi lokuhlambela elingentla linophahla oluphezulu olungalungelanga umphunga kodwa iarch yesilingi yongeza ukubamba okuhle. Icala leshawa linodonga olungena ngaphakathi ebhafini. Ngelixa i-marble yodonga lokuhlamba, ibhafu, kunye neethayile zomgangatho azingqinelani ngokupheleleyo, ziyafana ngokwaneleyo ukugcina uyilo luhlukile. Izibane ezingaphezulu kwishawari zigcina ngokukhanyayo.
Ilitye ikwanemathiriyeli enokukhetha enkulu kwigumbi lokuhlambela. Enye yezona zinto zinkulu abaninimzi abaya kuqaphela kukuba ilitye ligcina ubushushu ngcono. Ke, xa ungena kwishawa eshushu, awuyi kuva nayiphi na ithayile ebandayo phantsi kweenyawo zakho. Iya kufudumala phantse ngokukhawuleza njengamanzi.
Ezona ntlobo zaziwayo zamatye eshawa yimarble, igranite kunye netravertine. Iindidi ezimbalwa zezinto ezingaqhelekanga zibandakanya isileyiti, i-onyx kunye nelitye lentlabathi.
Unokuphinda uthathe ithuba lobume bendalo bamatye. Le ishawa ayilinqumli ilitye libe ziithayile ezisetiweyo kodwa ivumela ilitye ukuba libekho kulwakhiwo lwendalo kwii-slabs. Oku kusebenza kakuhle ekudaleni uyilo olwahlukileyo lokuhlamba ngaphandle kokukhupha imali kuyilo lwesiko ngokupheleleyo.
Kule ndawo yokuhlambela, i ishawari yetravertine ijongeka inomdla, ngakumbi nendlela iithayile zelitye ezincedisana ngayo nezinye izinto zendalo ezinje ngeplanga. Intloko yeshawari engaphezulu iyanceda ukwenza okuninzi kwivenkile encinci nayo.
Amatye asikiweyo anokusetyenziselwa ukwenza iipateni njengokwenza iithayile. Le ndlu yokuhlambela isebenza ukudibanisa ukufana kwethayile kunye nokungaqhelekanga kwendalo. Basebenzisa iphethini yethayile esemgangathweni kodwa ukwahluka kombala wendalo kwelitye kwenza ukuba likhetheke.
Ubume bendalo bamatye bunokusetyenziselwa ukwahluka ngokwabo. Le ishawa itshintsha izinto ngokuqinisekisa ukuba akukho tile ihamba ngokuthe ngqo elandelayo. Oku kudala udonga lwentetho olunomdla nolubambisa amehlo ukuseta olu hambo kwisitya sokuhlambela ngaphandle kwabantu bexesha laso.
Ukuhamba ngamatye kwindawo yokuhlamba kukwakunika amandla okudlala ngeendlela ezahlukeneyo. Ngelixa iithayile zelitye kunye neeslabs zihlala zicocekile, le ishawa yasebenzisa ithuba leeridge kwilitye abalisebenzisileyo. Oku kuqhekeza umphezulu ogudileyo wayo yonke ishawa kwaye kudala ubume bangemva bokwenza ibhentshi kunye neeshelfu.
Uyilo lwangaphakathi lunokuba ngumceli mngeni ngakumbi xa usebenza ngendawo encinci. Abanini bamakhaya abaninzi bayarhoxa kwinto yokuba abanakuba neempawu ezifana nokuhamba ngokuhlamba kuba abanalo tu igumbi. Nangona kunjalo, ngobukrelekrele obuncinci, awunamathele kwimbono yokuba ukuhamba kwisitya akusayi kukusebenzela.
Ukuhamba kwiishawa ngaphandle kweengcango yindlela efanelekileyo yokunciphisa indawo yokuhlambela. Le ishawa isebenzisa iishelfu ezingaphakathi. Oku kukuvumela ukuba ugcine iimfuno zakho njengesepha, ishampu, kunye nesilungisi ngaphandle kokuthatha nasiphi na isithuba kwishower. Sebenzisa isihlalo esizimeleyo kunokuba ibhentshi eyakhelweyo ikunika igumbi lokuphinda uhlaziye indawo njengoko ungafuneki ngoku nakwixesha elizayo.
Unokusebenzisa ukubeka indawo yokuhlambela kwikona enye yegumbi lokuhlambela. Le ndawo yokuhlambela yenza kanye kwaye, njengendawo yokuhlambela enkulu ebesijonge kuyo ngaphambili, masivumele ishawa sihlale ecaleni ukutsala umdla kwibhafu ezimeleyo. Le yindlela entle yokwenza igumbi lokuhlambela elincinci libonakale likhulu ngokungangxibi yonke into kwindlu yangasese kunye. Ubungakanani obukhulu bokukhanya kwendalo kwigumbi lokuhlambela kunceda nokukuvula.
Uyilo lwangoku, oluncinci luyanceda nokwenza uninzi lwendawo encinci. Le ndlu yangasese isebenzisa indlu yangasese encinci kunye nesinki yokudibanisa. Itafile yeshawari inde kwaye ibhityile elungiselela ukungabikho kobubanzi kwigumbi lokuhlambela. Ikwasebenzisa i-inset shelving ukwenza ugcino olongezelelweyo ngaphandle kokuphulukana nendawo. Nangona kungekho kukhanya kwendalo kule ndawo yokuhlambela, uyilo olumhlophe olukhanyisiweyo kunye nesipili esikhulu songeza ukukhohlisa kwendawo eyongezelelweyo.
Ukuhamba okuncinci kwindawo yokuhlamba ngaphandle komnyango
Eyona mpendulo icacileyo kwigumbi lokuhlambela elincinci kukuba uhambe kancinci kwisitya sokuhlambela. Eyona njongo iphambili kukuqinisekisa ukuba ngelixa ishawa incinci, ayixineki okanye ayonwabanga. Uyilo olungcono lwangaphakathi lwenza elona thuba unalo endaweni yokuxinanisa yonke into kwigumbi elincinci kunye kwaye ukhathazeke malunga nokuba liyangena na.
Enye yeendlela ezilungileyo zokugcina indawo, njengale ndawo yokuhlambela, kukusebenzisa ikona kwaye ungenzi indawo eyongezelelweyo ngokukhetha ukungafaki ucango. Sukuba nexhala malunga namanzi. Le shawa iya kuba nomsele phantsi kwesitendi ukuze isitshizi singatyibiliki igumbi lakho lokuhlambela. Ishelufu encinci ye-inset nayo igcina indawo.
UKUYA hamba nge shower nge bench ikuvumela ukuba uphumle kancinci kwishawari yakho emva kosuku olude loxinzelelo. Njengale shawari, ikunika ithuba lokuhlala phantsi kwaye wonwabele umphunga kunye nokuphumla. Bayimpawu entle yoyilo eyongeza kwisitya sakho. Banokusebenza ngenjongo yezobuchwephesha njengokukunika ipherch ngelixa uchetya imilenze yakho okanye usebenza njengeshelfu yethutyana phakathi kweshawari.
Ezi zitulo zilula ukuzifaka kwaye azidingi gumbi longezelelweyo kuba zibekwe eludongeni. Ingumbono olungileyo ngokukodwa ukuba uyatyibilika kuhambo oluqhelekileyo lokuhlamba.
Iglasi yenye yezona zinto zithandwayo xa kusenziwa izahlulelo kunye neengcango zokuhamba kwimvula. Esinye sezizathu zoku kukuba yinto eguquguqukayo engaphelelanga kumbala okanye iphethini. Ingasetyenziselwa kwiindawo zokuhlambela ezahlukeneyo ukuthelekisa uyilo oluyingqayizivele.
Igumbi lokuhlambela elingentla lisebenzisa uyilo olumhlophe olucocekileyo oluthi ukuhamba ngeeshawari ngeminyango emnyango kungaphazamisa. Isebenza kakuhle ngemigca ecocekileyo kunye nee-engile ezibukhali zezinye iindawo zokuhlambela ezinje ngezibuko ezixande kunye neesinki zesikwere.
Uyakuqaphela kwakhona ukuba isahlulelo seglasi kunye neengcango zihlala zigungxula ngokuchasene nophahla olungasentla kwalo. Oku kunceda ukugcina umphunga omninzi xa uhlamba. Olu luyilo lukwavumela ukuba imarble ikhanye njengendawo ekugxilwe kuyo kwigumbi.
Le yangasese, kwelinye icala, ayoyiki umbala. Le ndlu yokuhlambela i-cozier isebenzisa ukhilimu, umdaka, kunye ne-teal encinci. Ibhafu embindini kunye namampunge ngokucacileyo ziindawo ekugxilwe kuzo ezenza le ndawo yokuhlambela ibonakale njengendawo entle yokufumana ulungiselelo ekuqaleni kwemini kwaye ulungele ukulala ebusuku. Ukugcina oku, ukuhamba kwisitya kulula. Isebenzisa iithayile ezimhlophe ezingwevu kunye neengcango zeglasi ngaphandle kwesakhelo esibonakalayo sokuvumela ishawa ukuba idibane nayo yonke eminye imihombiso ngaphandle kokuyisusa kuyo.
Izahlulelo zeglasi ezinesakhelo yindlela ekrelekrele yokwahlula indawo yokuhlambela kwindawo yokuhlambela, kuba ayenzi ukuba indawo izive icinene kakhulu, kodwa endaweni yoko iyenza ijongeke ngakumbi. Kwakhona iithayile ezishicilelweyo zejometri ezisetyenziselwa udonga zenza iskimu sombala ongwevu ongwevu wokuhamba kweshawa kunomdla ngakumbi kwaye kunika umdla.
Iglasi lukhetho olukhulu kuba inokuthatha ithoni yezinto eziyingqongileyo. Ngokukodwa, isebenza kakuhle ngeetoni eziluhlaza ngoba ibonakalisa ngokulula loo nto. Uyabona kwigumbi lokuhlambela elingaphezulu ukuba iglasi isebenza kakuhle nodonga olunenxalenye eluhlaza okwesibhakabhaka ecaleni kwayo. Ngapha koko, ithatha loo ithoni nangona udonga olusemva kwayo lumhlophe qwa. Isahlulelo seglasi sisebenzisa imilo eyahlukileyo ukubeka ibhafu kwindawo yokuhlambela. Kuba iglasi iza ngasemva kwaye ijikeleze icala, ayikhangeleki ngathi ibhafu ibekwe nje ecaleni kwayo. Inika indawo eyahlukileyo ukuba ingene.
Lo ngomnye wemizekelo ebalaseleyo yokulungela ukuhamba kwisitya sendalo ngokwendalo. Ikwalawula ukuba yishawa enkulu ngaphandle kokuthatha ububanzi obungaphezulu kokudityaniswa kweshawa kunye nebhafu. Umnyango weglasi ulula kuyilo kwaye uhamba ecaleni nangaphezulu kodonga ngapha nangapha. Oku kwenza ukuhamba kwisitya kubonakale ngathi kuyindalo, ukhetho lokuqala loyilo. Ikwaphula uyilo olumhlophe olucocekileyo lokuhlamba ukuze kusetyenziswe umgca wokugcoba kunye nomgangatho wokuhlamba. Kuba ulwahlulo kunye nomnyango wenziwe ngeglasi, uyalubona olu uyilo luphuma kwigumbi lokuhlambela.
Uyilo lwala maxesha luhlobo olwahlukileyo loyilo lwangaphakathi oluhlala luvula imigca ecocekileyo kunye nobuncinci. Awuyi kufumana imibala enesibindi kunye neqaqambileyo okanye i-knick-knacks egqithisileyo okanye iziqwenga ezincinci zolu hlobo loyilo. Ukuhamba kwimvula kuncedisa olu hlobo loyilo kakuhle kuba amakhethini eshawa zihlala zijonga indawo encinci kwindawo yokuhlambela encinci. Oku kuhamba kwimvula yimizekelo emihle yoyilo olwenziwe ngokufanelekileyo.
Uyabona ukuba le ndawo yokuhlambela ayisebenzisi nayiphi na imilo eyahlukileyo kwisahlulo seshawa uqobo. Ithe tye ngaphesheya ngaphandle kotshintsho olubukhali kwi-engile kwisahlulelo seshawa uqobo. Nangona kunjalo, igumbi lokuhlambela ligcina uyilo oluncinci ngaphandle kokuba ludlolo. Iithayile ezingwevu phantsi nasemacaleni eshawa zisebenza kakuhle koku kodwa udonga lwangasemva lokusebenzisa ipatheni emnyama enamacala amhlophe njengezimbo ezinomdla.
Igumbi lokuhlambela elingentla lithatha uyilo olumhlophe ngakumbi kodwa liyaphula i-monotony ngodonga olubunjiweyo olukhokelela kwishower. Kuba ukuhamba kwishawari akunayo nayiphi na iminyango, ivumela uyilo ukuba luhambe lungophuki kwaphela lishiti leglasi. Ikwasebenzisa intloko yeshawa yanamhlanje ukugqiba ukujonga. Yibhityile encinci, yesikwere, yentloko yeshawa ethembisa ishawa ebutofotofo nakule venkile incinci.
Sele sixoxe ngendlela ubume obunokudlala ngayo indima enkulu ekwenzeni uyilo olwahlukileyo. Le ndawo yokuhlambela ithatha oku ngentliziyo. Ubume obuthe tyaba beendonga bukhokelela kwiso lakho ngqo kwishawari ekucacileyo ukuba yindawo ekugxilwe kuyo. Oku kuqhutyelwa ekhaya ngodonga olujikelezileyo, olumnyama ngwevu ekupheleni kwegumbi. Oku kukwahlukile kumgangatho weshawa wesitayile se-mosaic. Esi sesinye ishawa esongeza kwiimvakalelo zanamhlanje ngentloko yeshawari eyahlukileyo. Engachazwanga idreyini engapheliyo Ukudityaniswa komthungo kwikona evumela umntu ukuba aqonde ukutyibilika kwamatye omlambo.
Zininzi izibonelelo zokuphumla kwi ishawa yomphunga . Inokukunceda ukuphucula ukujikeleza kwakho, phumla izihlunu ezibuhlungu, uncede ukucoca ukubanda kwentloko, kunye nokunye. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iishawa ezisebenza njengeeshawari yomphunga. Kukufuna ukuba kufuneka ugcine engqondweni xa unciphisa uyilo oluchanekileyo olufunayo. Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo onokufikelela kuzo, nangona kunjalo.
Yisayensi esisiseko kuphela ukuba ukuba ufuna umphunga omninzi, kufuneka ube namanzi amaninzi. Ngaphandle kwamanzi, awufumani umphunga. Ke, unokunceda ukuhamba kwakho eshaweni ngokuba neentloko ezinkulu zeshawari kunye nezinto ezongeziweyo. Le ishawa isebenzisa intloko yeshawari enkulu yokuhambisa isitshizi ngaphandle kokungonwabi ngenxa yoxinzelelo. Ishawari ikwabandakanya isitshizi secala ukongeza kwisitshizi. Ayisiyiyo kuphela eyongeza umnxeba wobunewunewu, kodwa ikongeza umthombo ongaphezulu womphunga.
Kukwabalulekile ukuba umphunga uqulethwe. Ukuba iyakwazi ukubaleka ngaphandle kweshawa ngokulula iyakusasazeka ngokukhawuleza. Kungenxa yesi sizathu le nto iishawa ziyilelwe ukusuka kumgangatho ukuya kuphahla kwaye kutheni zingasetyenziswa rhoqo kumagumbi okuhlambela amade. Le ndlu yokuhlambela ihamba umgama owongezelelekileyo ngokuthi ngokungqinelana nodonga kwisitya esinomnyango weglasi kunye nefestile. Oku kuyasebenza ngokugqibeleleyo ngokugcina umphunga utshixiwe ngaphakathi kunye nomntu ohlambayo.
yimalini umntu ekufuneka ayichithe kumsesane wokuzibandakanya
Le ishawa isebenzisa uyilo oluphantsi ukuya kuthi ga phezulu ukuze ibambe umphunga. Yintoni ekugxilwe kuyo apha, nangona kunjalo, yibhentshi eyakhelweyo. Ukuba ufuna ukufumana okuninzi kwisitya se-steam, kufuneka ukhululeke kuyo. Ukuba uthabatha ishawa ngokukhawuleza, ngekhe ukwazi ukufumana izibonelelo ezipheleleyo zomphunga. Ngale shawa, abasebenzisi banokuhlala phantsi kwaye baphumle kwaye ukusukela umphunga ubhajwe ngaphakathi, akufuneki bakhathazeke ngokuqhuba rhoqo kwamanzi ukuze bonwabele.
Sithethile kakhulu malunga noyilo lwangoku kule ndawo kodwa hamba kwiishawa unokuziqhelanisa nayo nayiphi na uyilo ukuba ubeka isicwangciso esifanelekileyo. Makhe sijonge kuyilo olunye ohluke kakhulu kuyilo lwanamhlanje: uyilo lwe-rustic. Ukuba ukhetha imibala efanelekileyo, izixhobo, kunye neemilo, zonke ziya kudibana kakuhle.
Inxalenye enkulu yoyilo lwe-rustic zizinto ozisebenzisayo. Ujoliso lwale ndlela yokuhombisa kukwizinto zendalo. Uyabona ukuba kudlalwa apha ngokusetyenziswa kwamatye kuyo yonke indawo yegumbi. Kuyanceda ukuba ezi tile zelitye zinobushushu obushushu, obomdaka obukwayinto eyaziwayo kuyilo lwe-rustic. Ngale ndlela, ngaphandle kokuba igumbi lokuhlambela ikakhulu ngethayile, lisamkeleka kwaye lifudumele.
Xa uzama ukugcina iithowuni zifudumele kwaye zikufutshane nokungathathi hlangothi, izixhobo zensimbi ezingenasici zihlala zinamathela ngaphandle njengesithupha esibuhlungu. Le ishawa itshintsha izinto kunye nezinto zegolide. Ikwagcina uyilo lwe-rustic lungahambi kuphela ngeendonga zamatye kodwa kunye neempawu zomculo.
Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza ukuba ishawa yakho ilingane ngaphandle komthungo kunye nayo yonke indlu yangasese kukusebenzisa udonga olisiqingatha njengenxalenye yokwahlulahlula. Oku kwenza indawo yokuhlambela eyakhiwe kwigumbi lakho lokuhlambela kunokuba ujonge ukufakwa kuyo. Le ikwayindlela entle yokongeza indawo entle kwigumbi lakho lokuhlambela ngaphandle kokuba ulirhole ngexabiso eliphezulu.
Le yangasese idibanisa udonga olunesiqingatha kunye nesahlulelo seglasi sokuchaza ishawa kwigumbi lonke. Oku kukwavumela ipatheni ekhethekileyo yethayile eludongeni lweeshawari ukuba ime ngaphandle ngenxa yokuba iboniswa eludongeni lwesiqingatha nakwindawo yokuhlambela.
Unokubona kwelinye icala ukuba udonga lwesihlambi kunye nodonga oluqhubayo lubonelela ngendawo efanelekileyo yokwakha ibhafu. Ithayile yeshawa iyahluka kumgangatho wokhuni kananjalo kuba badlala ngeepatenticle kunye neepateniezithe tyaba ngokulandelelana. Ngaphandle komlomo okanye ityhubhu yokungena, utshintsho phakathi komgangatho kunye neshawa alunamthungo kwaphela.
Isiqingatha sodonga nayo yindlela efanelekileyo yokuchaza indawo kwindawo yokuhlambela encinci. Le ndawo yokuhlambela ayinamagumbi amaninzi kodwa igcina indawo eyoneleyo yokuhamba ishawa kunye nebhafu. Ukwahlula-hlula kodonga olukwisiqingatha kukwenza ukuba kubonakale ngathi igumbi lokuhlambela linendawo eninzi kuba ityhubhu kunye neshawari azixinene ecaleni kwenye.
Isiqingatha sodonga sinokuhlala ngqo ecaleni komnyango weshawari ukunceda ukuvala kwindawo ngcono. Le ndawo yokuhlambela ikwabonisa indawo yokuphuma eludongeni. Oko kubekwa kuluncedo ukuba useesinkini ecaleni kwaso ukomisa iinwele zakho emva kokuhlamba kwakho. Oku kubonisa ukuba indlela enesiqingatha inokuba yinto efanelekileyo njengoko inomdla.
Sele sijonge ulonwabo onokuba nalo kunye nokuthungwa kunye nokulungiswa okunje kungabonisa uthando lwakho ngalo. Nge-backsplash yethayile kwindawo yokuhlamba kunye nomjikelo we-wavy, zininzi izinto onokukhetha kuzo apha ezidityaniswa kakuhle.
Ukuhamba kwimvula ikwayindlela entle yokuphelisa igumbi lokuhlambela elincinci. Apha ungabona ukuba igumbi lokuhlambela limxinwa kodwa isithuba silungiselelwe kakuhle ngombhoxo omde kunye nekhawuntari ekhokelela kwindawo ekujongwa kuyo ishawa.
Ezi ntlobo zeeshawari zikwakhona zilungile kuba ungazilungela phantse naphina. Le yindawo yokuhlambela enkulu kodwa ishawa ithatha ikona encinci. Kuba ingene eludongeni kunokuba ivele njengendawo emileyo yokuhlambela, akufuneki uncame intuthuzelo yendawo.
Unokusebenzisa ukuhamba kwiishawa kwigumbi lokuhlambela lendabuko. Le ndlu yokuhlambela ayinazo izinto zobuchwephesha obuphezulu kwaye ayiweli kudidi loyilo lwangoku kodwa ishawa isangena ngokugqibeleleyo. Lilonke, lukhetho olubhetyebhetye kakhulu.
Ukuhamba kwimvula kubonelela ngeendlela ezininzi kwaye akukho mda wokuba zingabandakanywa njani kwigumbi lakho lokuhlambela. Ngelixa banikezela ngononophelo kunye nokuhomba okuhle ekhayeni lakho, awuyi kwisiqingatha sokukhathazeka kakhulu ngethegi yexabiso lokulungiswa kwakhona. Ngezimvo ezinje ngezi, uyakuba nesicwangciso sendawo yakho yangasese ngaphandle kwexesha.
Ukubona ngaphezulu iintlobo zeeshawari zangasese khangela le galari.
isipho sentombi ngomhla wakhe womtshato
Eyona nto yoyilo lokuhlambela
iiseti zefanitshala zegumbi lokulala emfusa
unxibe ntoni kwitheko lokwamkela umtshato
umhlobiso weentyatyambo wolwamkelo lomtshato
ilili yomtshato ilokhwe esetyenzisiweyo
iingoma zokucula emtshatweni nomtshakazi nomyeni